UHitachi uwine isiteshi sokuqala sokunxeshezelwa ngamandla kagesi osebenza ngasolwandle! Amandla asemoyeni aseYurophu
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, umfelandawonye oholwa yisikhondlakhondla sezimboni saseJapan uHitachi uzuze amalungelo wobunikazi nokusebenza kwezikhungo zokudlulisa ugesi zephrojekthi ye-1.2GW Hornsea One, ipulazi lomoya elikhulu kunawo wonke elisebenza njengamanje elisebenza njengamanje. Umfelandawonye, ​​obizwa ngeDiamond Transmissi ...
Yize kunezinhlobo eziningi zama-turbine omoya, angafingqwa ngezigaba ezimbili: imishini yomoya evundlile ye-eksisi, lapho i-eksisi yokujikeleza yesondo lomoya ifana nesiqondiso somoya; imishini yomoya eqondile ye-eksisi eqondile, lapho i-eksisi yokujikeleza yesondo lomoya iqondane ne-gr ...
Yiziphi izingxenye eziyinhloko zomoya ophephela
I-Nacelle: I-nacelle iqukethe okokusebenza okuyisihluthulelo komoya ophephela, kufaka phakathi amabhokisi wamagiya nama-generator. Abasebenzi besondlo bangangena ku-nacelle ngombhoshongo womoya ophephela. Isiphetho sangakwesokunxele se-nacelle yi-Rotor ye-generator yomoya, okungukuthi ama-rotor blades kanye ne-shaft. Rotor izindwani: ca ...
Amandla amancane kagesi ophephela womoya
Kubhekisa kunqubo yokukhiqiza yokuguqula amandla kagesi, uphethiloli wamalahle (amalahle, uwoyela, igesi yemvelo) amandla ashisayo, amandla enuzi, amandla elanga, amandla omoya, amandla we-geothermal, amandla olwandle, njll kumandla kagesi ngokusebenzisa amadivayisi wamandla okukhiqiza amandla, okubizwa ngokuthi ukukhiqizwa kwamandla. Kusetshenziselwe ukwengeza ...
Ngabe i-turbine yomoya ikhiqiza enye yamanje noma eqondile eguqukayo?
I-turbine yomoya idala ukushintshana kwamanje Ku ukuthi Ngenxa yokuthi amandla omoya awazinzile, okukhipha i-generator yamandla omoya kungu-13-25V oshintshashintshayo njengamanje, okumele ulungiswe yishaja, bese ibhethri eligcinwayo likhokhiswa, ukuze amandla kagesi akhiqizwe ngamandla omoya ge ...
Isivivinyo sokwethembeka kwe-turbine yomoya
Abahlinzeki bezingxenye zemishini yomoya kumele benze inqubo yokuhlola esemthethweni ukuqinisekisa ukuthembeka kwezesekeli. Ngasikhathi sinye, kuyadingeka futhi ukuhlolelwa komhlangano wesibonelo wama-turbines omoya. Inhloso yokuhlola ukuthembeka ukuthola izinkinga ezingaba khona kusenesikhathi futhi kwenze ...